भिजिट नेपाल २०२० : एक महिना नबित्दै ६ धक्का
नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ १४, २०७६, २०:५२
काठमाडौं– 'हामी २०२० को नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। २०२० लागि हामीले नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा अगाडि सारेका छौं। सुरुमै हामीलाई अलिकति यसमा केही धक्काका संकेतहरू देखिएका छन्। प्राकृतिक हिसाबले केही समस्या देखा परेका छन्, जसलाई हामीले सावधानीपूर्वक सामाना गर्नु पर्नेछ। सरकार त्यसको तयारीमा लागेको छ।'
यो भनाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो। मंगलबार नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍मा यस्तो बताएका हुन्। के प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भिजिट नेपाल २०२० सुरु भएको एक महिना नपुग्दै भएका घटनाले भिजिट नेपाललाई धक्का लाग्न सक्छ?
भिजिट नेपाल सुरु भएसँगै धक्का
१. भिजिट नेपाल २०२० को औपचारिक उद्घाटन भव्य समारोहबीच जनवरी १ मा दशरथ रंगशालामा भएको थियो। भिजिट नेपालको भव्य उद्घाटन हुँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्ने एक निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड भने सिइओबिहीन थियो। डिसेम्बर २३ देखि नै नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको थियो।
पर्यटन बोर्डको सञ्चालक बोर्डले निर्वतमान सिइओ दीपकराज जोशीलाई ३ महिनाको समय थप गरे पनि जोशीले नेतृत्व स्वीकार गरेका थिएनन्। बोर्डमा सिइओ खाली भएको एक महिनापछि जनवरी २८ अर्थात् मंगलबार मात्रै बोर्डले नयाँ सिइओका रूपमा डा धनञ्जय रेग्मीलाई पाएको छ।
यसैगरी, भिजिट नेपाल २०२० को औपचारिक उद्घाटन समारोहमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै टिप्पणी भएको थियो। निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुरज वैद्य भिजिट नेपाल २०२० को राष्ट्रिय संयोजकमा भए पनि उनलाई उद्घाटन कार्यक्रममा भूमिका दिइएन।
पर्यटन व्यवसायीका तर्फबाट सम्बोधन कार्यक्रमको सूचीमा समेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै महानायक राजेश हमाललाई स्वागत मन्तव्य दिन लगाइएको थियो। त्यसमा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पनि औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई 'वाइपास' गरेको बताएका थिए।
२. पर्यटनमन्त्रीमाथि अस्ट्रेलियाली प्रहरीको हस्तक्षेप
जनवरी ७ मा अस्ट्रेलियामा भिजिट नेपाल २०२० को उद्घाटनको कार्यक्रम थियो। कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाली प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि विरोध भएको थियो। मन्त्रीसहित सहभागी र्‍यालीमा त्यहाँको प्रहरीको हस्तक्षेप भएको भन्दै नकारात्मक प्रचारसमेत भएको थियो। साथै, उक्त कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको थियो। कारण थियो, अस्ट्रेलियालियाले लामो समयदेखि लागेको डडेलो। डडेलो रापमा तातिएको अस्ट्रेलियामा नेपालको पर्यटन प्रचारका गतिविधि भएको र यसमा सरकारले सावधानी नअपनाएको भन्दै विरोध भएको समाचार आएका थिए।
जनवरी १८ मा अन्नपूर्ण आधार शिविरको हिमपहिरो यो हिमपहिरोमा परी दर्जनभन्दा बढी विदेशी तथा नेपाली नागरिक पुरिए। जुन अन्नपूर्ण ट्रेकिङको सिजन सुरु भएसँगै हुन पुगेको दुखद् घटना थियो। विदेशी नागरिकका लागि अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुट बढी चासो रहने विषय हो।
४. दामनमा भारतीय पर्यटकको मृत्यु
जनवरी २० मा मकवानपुरको दामनस्थित पानारोमा रिर्साटमा ८ भारतीयको निधन भयो। पोखरा हुँदै पारिवारिक भ्रमणमा आएका १५ भारतीय उक्त दिन बेलुका दामनको पानारोमा रिर्सोटमा बास बस्न पुगेका थिए। ४ वटा रुम बुक गरेका भारतीय नागरिकले अत्यधिक चिसो भएको भन्दै दुई वटा कोठा मात्रै प्रयोग गरेका थिए। तर, ८ जना सुतेको रुममा प्रयोग गरिएको हिटरका कारण उनीहरूको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाले पनि नेपालको रिसोर्टको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको छ।
५. कोराना भाइरस
विश्वमा नै पहिलो पटक चीनमा देखा परेको कारोना भाइरस नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। अहिलेसम्म १ नेपालीलाई कोराना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ। अन्य एक जनामा पनि सो भाइरसको संक्रमण भएको फेला परेको भनिएपनि सरकारी निकायले यसको खण्डन गर्दै आएका छन्।
चीनबाट फर्केका व्यक्तिमा यो भाइरस देखा परेको हो। चीनले पनि कोराना भाइरस देखा परेका सहरमा जान र त्यहाँबाट बाहिर जान नपाउने गरी शिल गरिसकेको अवस्था छ।
नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्यामा चीनको दोस्रो हिस्सा छ। सन् २०१९ मा मात्रै चीनमा नेपाल भम्रणमा आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी थियो। यसरी आउने पर्यटकमा हवाईमार्ग र स्थलमार्ग हुँदै आएका थिए। सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ पर्यटकमध्ये स्थलमार्गबाट आउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। करिब ३३ हजार चिनियाँ पर्यटक स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। जुन संख्या रसुवागढी नाका भएर आउने पर्यटकको बढी छ।
रसुवागढी नाका मंगलबारबाट १५ दिनका लागि बन्द भइसकेको छ। साथै नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये यो सिजनामा चिनियाँ नै बढी हुने गरेको विगतका तथ्यांकले देखाएको छ। चिनियाँ पर्यटकको सिजनमा नै देखा परेको कारोना भाइरस नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लागि घातक हुने आँकलन गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकाबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटक पनि चीन ट्रान्जिट भएर नै आउने गरेका छन्। अस्ट्रेलियाबाट नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश पर्यटक चीनको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्।
कोराना भाइरसकै कारण भिजिट नेपालमा धक्का लाग्ने सक्ने भन्दै पूर्व अर्थसचिवले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कारोना भाइरसका विषयमा सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरिसकेका छन्।
६. पाइलट राजीनामाको चेतावनीपत्र
नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी ए-३३० र एयरबस-३२० उडानमा रहेको २२ जना पाइलट तथा को–पाइलटले सेवा/शर्तमा विभेद भएको भन्दै ३ महिनाभित्र समाधान नभए राजीनामा दिने भन्दै चेतावनीपत्र दिएका छन्। पाइलटको राजीनामा स्वीकृत भएको अवस्थामा नेवानिका धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुनेछन्।यी विषयले नेपालमा आउने पर्यटको संख्यामा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अर्थात् २० पर्यटक भित्र्याउन चुनौती थपिकएको छ।
दोस्रो शृंखलामा पर्यटनका विविध क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे पर्यटनसँग सरोकार राख्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका धारणा समावेश गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नेछौं।